'भद्रगोल' टिमको फिल्म पनि चैत्र २८ मा ?
प्रकाशित : मङ्गलबार, जेठ २१, २०७६१६:१०
फिल्म । नया वर्षलाई लक्षित गर्दै प्रदर्शनमा आउने फिल्मले राम्रो व्यवसाय गर्ने गरेका छन् । वैशाख १ गते लगभग फिल्म ‘हाउसफुल’ नै हुन्छ । एकदिने कलेक्सन नै ५० लाख बढी हुन्छ राम्रो हल पाएमा त्यसमा फिल्म राम्रो छ भने कलेक्सन नबढ्ने कुरा नै भएन । फिल्म राम्रो यस अर्थमा कि फिल्मको ‘वर्ड अफ माउथ’ राम्रो जानु पर्छ । पछिल्लो समय यस वर्षको अन्त्य अर्थात् चैत्र २८ लाई लक्षित गर्दै फिल्म ‘प्रेम गीत ३’ ले रिलिज हुने घोषणा गरेको छ । प्रेम गीत सिरिजका निर्माता सन्तोष सेनले फिल्म घोषणा गरेसंगै गीतको खोजि गरिरहेका छन् ।
विना सम्झौता फिल्म निर्माण गर्ने निर्माताको रुपमा चिनिएका सन्तोषको फिल्मकै डेटमा ‘फनफनी’ प्रदर्शनमा आउने चर्चा फिल्मनगरीमा छ । भद्रगोल समुहको निर्माण रहने फिल्ममा धुर्मुस र सुन्तली अर्थात सिताराम कट्टेल र कुन्जना घिमिरेको पनि अभिनय रहनेछ । फिल्मको स्क्रिप्टमा काम भईरहेको छ भने यो आउँदो साउन भित्रमा छायाँकनमा लाग्ने लक्ष्य निर्माण पक्षको रहेको छ । निर्देशक अशोक शर्माको फिल्म ‘रातो टिका निधारमा’ सँग कथा मिल्दोजुल्दो भएपछि आपसी सहमतीमा ‘भद्रगोल’ का कलाकारद्वय कुमार कट्टेल र अर्जुन घिमिरेले कथामा केही परिवर्तन गरेका छन् । कथाको काम सकिएपछि कलाकारलाई स्क्रिप्ट दिएर टिम सल्लाह हुनेछ ।
फिल्मी बजारमा चलेको गसिपको कुरा गर्ने हो भने यसलाई प्रदीप भट्टराईले निर्देशन गर्न सक्नेछन् । टेलिफिल्म हुँदै ठुलो पर्दाको फिल्म निर्देशनमा आएका प्रदीपले स्टोरी मन पराएको चर्चा छ । यस अघि उक्त टिमले निश्चल बस्नेतलाई निर्देशकको रुपमा अनुबन्ध गरेको थियो । तर , निश्चलसंग कथामा सहमति नभएपछि यतिबेला टिमले प्रदीपसंग कुरा अगाडी बढाई रहेको बुझिएको छ ।
‘राम राम’ मा सौगात र सुवर्ण अनुबन्धित
जात्रै जात्रा टिम भन्छन् ‘व्यासवायिक धर्म निर्वाह गरौ’
चैत्र २९ : कसले जुधाए फिल्म ?
करणले भने ‘माग गर्देउ’
‘मेरो प्रतिबद्धता पुरा गर्छु’ अध्यक्ष खड्का